Dhiigyari (Anemia) Gaaldiid
Bogga Hore > Causes > Dhiigyari (Anemia)
DHIIG YARI (Anemia):-
Waa maxay dhiig yaridu?
Dhiiga yaridu waa unugyada dhiiga cas oo yar ama xaddiga Hemogolobinta ee unugyada dhiiga cas oo yar. Hemogolobintu waa maado bir ah oo midabka dhiigana ka dhigta inuu casaado, waxayna gudbisaa oksijiinta ka timaada sanbabada kuna socata unugyada jidhka. Dhiigyaridu waxay sababtaa in unugyada jidhku aanay helin oksijiin ku filan.
Maxaa keena Dhiig yarida?
Dhiigyarida waxa keena qofka oo dhiigbaxa tusaale ahaan:- dhiigbaxa dhiiga caadada, dhaawac caloosha ama mindhiciraha ah iyo qofka oo shil gala kadibna aad u dhiigbaxa mudo yar gudaheed. Sidoo kale waxa dhiig yari keeni kara faytamiinada qaarkood oo aad u yar.
Jidhku waxa uu ubaahanyahay bir si loo soo saaro unugyada dhiiga cas, mararka qaarna waxa loo baahanyahay bir dheeraad ah gaar ahaan xilliga caruurtu korayaan, haweenku uurka leeyihiin iyo xilliga naas nuujinta.
Dadka da’doodu wayntahay waxa yaraada awooda jidhkoodu u leeyahay inuu sameeyo unugyada jidhka, sidaa darteed dadka waaweyn dhiigyaraantu way ku badantahay.
Wareer iyo madax xanuun.
Dhagaha oo guux sameeya.
Daawada aad qaadanayso waxay ku xidhantahay waxa sababay dhiig yaraanta, hadii birta oo yar ay sababtay waxaad qaadanaysaa kaniino ama Hemogolobin. Hadii faytamiinada oo yar ay keentayna waxaad qaadan fatamiinada.
Dadka qaba xanuunada qaar waxay u baahanyihiin daawoyin kale si jidhku u soo saaro unugyada dhiigga cas. Xaaladaha qaarkoodna waxa daruuriya in dhiig lagu shubo qofka gaar ahaa dadka aad u dhiig baxa mudo yar gudahood. Inta badan waa laga caafimaadaa dhiig yarida hadii la daweeyo wixii sababay dhiig yaraanta.